Tsy mitady zavatra foronin’ny saina
"Fa hianao kosa dia milazà izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema." – Tit. 2:1.
Tandindomin-doza hihoatra ny faha-tsoran'ny filazantsara mandrakariva isika. Olona maro no manana faniriana lalina ny hampitolagaga izao tontolo izao amin'ny zava-baovao izay hampientanentana lalina ny olona ho amin'ny fivavahana, ka hanova ny fizotry ny zava-misy. Azo antoka tokoa fa tena ilaina ovana ny fizotry ny zava-misy ankehitriny, satria tsy takatra amin'ny fahafenoany araka ny tokony ho izy ny fahamasinan'ny fahamarinana ankehitriny. Ny fiovana ilaintsika anefa dia ny fiovam-po, izay tsy azo afa-tsy amin'ny alalan'ny fitadiavana an'Andriamanitra ho fangatahana ny fitahiany, sy fitalahoana ny heriny, ary fivavahana mafy mba ho amintsika ny fahasoavany sy mba hanovany ny toetsika. Io no fiovana ilaintsika ankehitriny, ka mba hahatrarantsika io fanandramana io dia tokony haneho faharetana sy hafanam-po lalina isika. Tokony hanontany amim-pahatsorana marina isika manao hoe: "Inona no tokony hataoko mba hamonjena ahy?" Tokony ho fantatsika fotsiny ireo dingana tsy maintsy harahintsika mba hahatongavana any an-danitra.
Nanome fahamarinana ho an'ireo mpianany i Kristy, kanefa tsy dia nomeny lanja, na koa takany ny velaran'izany fahamarinana izany sy ny halaliny ary ny hasarobidiny. Izany ihany koa no zava-misy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny. Isika ihany koa mantsy tsy nahatakatra ny habe ary tsy nahatsapa ny hatsaran'ny fahamarinana izay nankinin'Andriamanitra tamintsika ankehitriny. Raha handroso eo amin'ny fahalalana ara-panahy isika, dia ho hitantsika ny firoboroboan'ny fahamarinana sy ny fivelarany eo amin'ny sehatra izay tsy dia novinavinaintsika, kanefa tsy hiroborobo na oviana na oviana eo amin'ny sehatra izay hitarika antsika hieritreritra fa mety fantatsika ny andro sy ny fotoana izay efa notendren'ny Ray amin'ny fahefany ihany. Nahazo fampitandremana hatrany hatrany aho momba ny famerana fotoana. Tsy hisy hafatra na oviana na oviana intsony homena ny vahoakan'Andriamanitra izay mifototra amin'ny fotoana. Tsy natao hahalala ny fotoana raikitra hirotsahan'ny Fanahy Masina na ny hiavian'i Kristy isika. - RH, 22 Martsa 1892.